जय किशन बस्नेतको नयाँ चलचित्रलाई पिजी सर्टिफिकेट (ट्रेलर सहित) - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७४ फागुन १७ गते १०:२७ मा प्रकाशित
हास्य जनारालाई मुख्य बिधा बनाईएको चलचित्र “तिम्रै छोरी तरुनी हामीलाई के को दोष” को निर्माण दिलाराम सापकोटाले गरेका हुन् भने क्लासिक फ्रेमको ब्यानरमा निर्माण भएको उक्त चलचित्रको प्रस्तुतकर्ता ईन्द्र दोङ (खम्बे) हुन् । कार्यकारी निर्माता सुदन धिताल रहेको उक्त चलचित्रमा जनकराज अधिकारीको छायाँकन, देव महर्जनको द्वन्द, शिव बि.क. र जय किशन बस्नेतको नृत्य तथा संजय लामा (बल) को सम्पादन रहेको छ । यस चलचित्रमा जय किशन बस्नेत, विष्णु सापकोटा (हर्के हवल्दार), महिमा सिलवाल, सुरबिर पण्डित (दारी बा), प्रकाश दाहाल, सुदन धिताल, मान बहादुर लामा, टिका थापा, दिलाराम सापकोटा, स्व. दिपेन शाह लगायतका कलाकारहरुले अभिनय गरेका छन् ।
चलचित्रको ट्रेलर तलको लिंकमा छ :